အတိတ်မှာနာကျင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးဆိုရင် လက်လွတ်မခံပါနဲ့...! - Thadin
HomeRELATIONSHIPအတိတ်မှာနာကျင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးဆိုရင် လက်လွတ်မခံပါနဲ့…!
အတိတ်မှာနာကျင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးဆိုရင် လက်လွတ်မခံပါနဲ့…!
May 16, 2019 Kay Kay RELATIONSHIP Comments Off on အတိတ်မှာနာကျင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးဆိုရင် လက်လွတ်မခံပါနဲ့…!
တကယ်လို့များ အမျိုးသားပရိသတ်တွေထဲက တစ်ယောက်တလေများ အတိတ်မှာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ ပရဗွနဲ့ ကျရှုံးခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ပတ်သက်ခွင့် ရနေမယ်ဆိုရင်၊ ဒီထက်ပိုပြီး ဝေးမသွားစေဖို့၊ ပိုပြီး နီးစပ်အောင် ကြိုစားဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အတိတ်မှာနာကျင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးဟာ သင့်ရဲ့ အချစ်စစ်အချစ်မှန်အတွက် အထိုက်တန်ဆုံးသော ရွေးချယ်မှုဆိုတာကို အောက်ပါအချက်တွေက သက်သေပြပါလိမ့်မယ်။
အတိတ်မှာ အချစ်ကြောင့် ခါးသီးတဲ့ဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ မိန်းမပျိုဟာ ဘယ်လိုချစ်ရမလဲဆိုတာကို သိသလို၊ ဘယ်လိုကြောင့် နာကျင်မှုတွေ ရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်း သင့်ကို သင်ပြပေးသွားမှာပါ။ သူမဟာ အချစ်မှာ အတွေ့အကြုံရှိခြင်း ဆိုတာထက် နာကျင်မှုမှာ အတွေ့အကြုံရခဲ့ပြီမို့ သင့်ကို သူလို့ နာကျင်မှုတွေ မခံစားရဖို့ ဖေးမ ကူညီပါလိမ့်မယ်။
(၂) နာကျင်မှုကို သိခဲ့ပြီ
အတိတ်ခါးခါးထဲမှာ ပျော်ကျခဲ့ရတဲ့ စိတ်ကူးရင် အိပ်မက်တွေ၊ သင်ရဲ့ အကြင်နာတရားနဲ့အတူ ပြန်လည်ဖမ်းဆုတ်ခွင့် ရတဲ့အခါ သူမ အထူးကို ဝမ်းသာနေပါလိမ့်မယ်။ ဒီနာကျင်မှုတွေပြေပျောက်ခြင်း ရှိမရှိဟာ သင့်အချစ်နဲ့ ဂရုစိုက်မှုပေါ်မှာ မူတည်ပြီး သူမကတော့ သင့်ကို ဘယ်တော့မှ နာကျင်စေလိမ့်မည်မဟုတ်။ လူဆိုတာ ကိုယ်နာဖူးမှ ကိုယ်ချင်းစားတတ်တာလေ။
သူမဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်က အချစ်မှာ အတ္တကြီးသူ ဖြစ်ချင်ဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်၊ ရယူလိုမှုတစ်ခုတည်းအတွက် ချစ်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့် လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ အဲဒီအတ္တတွေအတွက် သူမဟာ နောင်တတွေ၊ နာကျင်မှုတွေနဲ့ ထိုက်တန်သောပေးဆပ်မှုတွေ ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ သင့်အနေနဲ့ ဝေဒနာတွေ ပေးမယ် မထင်ပါနဲ့။ အကြင်နာတွေသာ သူမမှာ ကျန်ရှိပါတော့တယ်။
သင့်ရဲ့ လမ်းညွှန်ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ သူမဟာ ရဲရင့်လာမယ်။ ခံနိုင်ရည်ရှိလာမယ်၊ သတ္တိတွေ ပွားလာမယ်၊ နောက်တစ်ကြိမ် မကျရှုံးစေရတော့ဘူး။ ဘဝကို ဦးမော့ရင်ဆိုင်ရဲလာမယ်။ အတ္တကို မျှဝေသုံးစွဲတတ်လာမယ်၊ သင်သာလျှင် သူ့ဘဝရဲ့ အရှင်သခင် ဖြစ်ခွင့် ရှိပါတယ်။
(၅) ပိုပြီး ချစ်တတ်လာလိမ့်မယ်
ပထမအချစ်ကို အချစ်ဆုံးဆိုတာ အချစ်မှာကျရှုံးခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်တော့ မမှန်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို ပထမအချစ်ကို မချစ်လိုက်ရသေးတဲ့ အချစ်တွေ သူ့မှာ အများကြီး ကျန်နေပါသေးတယ်။ အချစ်မှာ ကျရှုံးခဲ့ရသူတွေရဲ့ အချစ်ဆုံးဟာ ဒုတိယအချစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ခံစားဖူးသူတိုင်းသာ သိနိုင်တာမျိုးပါ။
တကယျလို့မြား အမြိုးသားပရိသတျတှထေဲက တဈယောကျတလမြေား အတိတျမှာ ဒဏျရာဒဏျခကျြတှေ ပရဗှနဲ့ ကရြှုံးခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျကို ပတျသကျခှငျ့ ရနမေယျဆိုရငျ၊ ဒီထကျပိုပွီး ဝေးမသှားစဖေို့၊ ပိုပွီး နီးစပျအောငျ ကွိုစားဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။
အတိတျမှာနာကငျြခဲ့ဖူးတဲ့ မိနျးကလေးဟာ သငျ့ရဲ့ အခဈြစဈအခဈြမှနျအတှကျ အထိုကျတနျဆုံးသော ရှေးခယျြမှုဆိုတာကို အောကျပါအခကျြတှကေ သကျသပွေပါလိမျ့မယျ။
အတိတျမှာ အခဈြကွောငျ့ ခါးသီးတဲ့ဘဝကို ဖွတျသနျးခဲ့ရတဲ့ မိနျးမပြိုဟာ ဘယျလိုခဈြရမလဲဆိုတာကို သိသလို၊ ဘယျလိုကွောငျ့ နာကငျြမှုတှေ ရခဲ့တယျဆိုတာကိုလညျး သငျ့ကို သငျပွပေးသှားမှာပါ။ သူမဟာ အခဈြမှာ အတှအေ့ကွုံရှိခွငျး ဆိုတာထကျ နာကငျြမှုမှာ အတှအေ့ကွုံရခဲ့ပွီမို့ သငျ့ကို သူလို့ နာကငျြမှုတှေ မခံစားရဖို့ ဖေးမ ကူညီပါလိမျ့မယျ။
(၂) နာကငျြမှုကို သိခဲ့ပွီ
အတိတျခါးခါးထဲမှာ ပြျောကခြဲ့ရတဲ့ စိတျကူးရငျ အိပျမကျတှေ၊ သငျရဲ့ အကွငျနာတရားနဲ့အတူ ပွနျလညျဖမျးဆုတျခှငျ့ ရတဲ့အခါ သူမ အထူးကို ဝမျးသာနပေါလိမျ့မယျ။ ဒီနာကငျြမှုတှပွေပြေောကျခွငျး ရှိမရှိဟာ သငျ့အခဈြနဲ့ ဂရုစိုကျမှုပျေါမှာ မူတညျပွီး သူမကတော့ သငျ့ကို ဘယျတော့မှ နာကငျြစလေိမျ့မညျမဟုတျ။ လူဆိုတာ ကိုယျနာဖူးမှ ကိုယျခငျြးစားတတျတာလေ။
သူမဟာ ပွီးခဲ့တဲ့အတိတျက အခဈြမှာ အတ်တကွီးသူ ဖွဈခငျြဖွဈခဲ့ပါလိမျ့မယျ၊ ရယူလိုမှုတဈခုတညျးအတှကျ ခဈြခဲ့တာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျ့ လကျတှဘေ့ဝမှာတော့ အဲဒီအတ်တတှအေတှကျ သူမဟာ နောငျတတှေ၊ နာကငျြမှုတှနေဲ့ ထိုကျတနျသောပေးဆပျမှုတှေ ပေးခဲ့ပွီးပါပွီ။ သငျ့အနနေဲ့ ဝဒေနာတှေ ပေးမယျ မထငျပါနဲ့။ အကွငျနာတှသော သူမမှာ ကနျြရှိပါတော့တယျ။
သငျ့ရဲ့ လမျးညှနျဦးဆောငျမှုအောကျမှာ သူမဟာ ရဲရငျ့လာမယျ။ ခံနိုငျရညျရှိလာမယျ၊ သတ်တိတှေ ပှားလာမယျ၊ နောကျတဈကွိမျ မကရြှုံးစရေတော့ဘူး။ ဘဝကို ဦးမော့ရငျဆိုငျရဲလာမယျ။ အတ်တကို မြှဝသေုံးစှဲတတျလာမယျ၊ သငျသာလြှငျ သူ့ဘဝရဲ့ အရှငျသခငျ ဖွဈခှငျ့ ရှိပါတယျ။
(၅) ပိုပွီး ခဈြတတျလာလိမျ့မယျ
ပထမအခဈြကို အခဈြဆုံးဆိုတာ အခဈြမှာကရြှုံးခဲ့တဲ့သူတှအေတှကျတော့ မမှနျပါဘူး။ ဘာကွောငျ့ဆို ပထမအခဈြကို မခဈြလိုကျရသေးတဲ့ အခဈြတှေ သူ့မှာ အမြားကွီး ကနျြနပေါသေးတယျ။ အခဈြမှာ ကရြှုံးခဲ့ရသူတှရေဲ့ အခဈြဆုံးဟာ ဒုတိယအခဈြဖွဈမယျဆိုတာ ခံစားဖူးသူတိုငျးသာ သိနိုငျတာမြိုးပါ။
သင့်ကိုယ်သင် တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေလုိုက်နာရမယ့် အချက်များ…!
ကားရိုက်မရှိလို့ ကလေးစရိတ်တောင် အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်…!
This Month : 39178
This Year : 234576
Total Users : 593600
Total views : 2725430